Tokony halana ny vato dia miverina izahay. Fa raha alana izahay dia tsy tany hanorenana fa trano no ilainay. Raha ilaozana koa ny entana, manahirana, satria tamin’ny alatsinainy izao efa alina vao tonga ny mpitandro ny filaminana. Raha taomina anefa telo alina Ariary ny indray mitatitra, ary tery ny tranolay misy anay eto amin’ny INFP. Tsy fantatra koa hoe : “mandra-pahoviana izahay no eto amin’ny INFP, kianja mitafo ety Mahamasina ?”, hoy ny raim-pianakaviana iray, Jaona Fabien Andriandrafimparany, izay nilaza ho mpitondra tenin’ny madinika.